Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ukufihla okugqithisileyo kwiMfazwe yokutya okuyingozi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Zininzi iindlela zokutya nemask.
Kwisikolo samabanga aphantsi kwiphondo laseWashington, e-USA, inqununu ixelele abazali ukuba baxelele abantwana babo ukuba kufuneka banxibe iimaski zabo xa besitya isidlo sasemini kwindawo yokutyela-lonke ixesha lokutya kwabo. Ngamanye amagama, thatha ifolokhwe, yehlisa imaski yakho, thatha ukuluma, phakamisa imaski yakho, uhlafune, gwinya, uphinde.
Umgaqo-nkqubo wesithili sesikolo ngokunxiba imaski ye-COVID-19 uthi iimaski akufuneki zinxitywe xa kutyiwa.
Umsasazi woonomathotholo uJason Rantz wazisa ezi ndaba kuluntu ngokubanzi ngenkqubo yakhe yonomathotholo i-AM kwi-KTTH eSeattle.
Ufumene ikopi ye-imeyile ethunyelwe kubazali ivela kutata ochaphazelekayo othe ixesha lesidlo sasemini lixesha eliyingozi.
I-imeyile evela kwinqununu yeGiger Montessori Elementary School eTacoma, eWashington, uMnu. Neil O'Brien yathunyelwa kubazali ngenjongo yokuzihlaziya kwimigaqo-nkqubo yesikolo i-COVID-19. Inxalenye yale imeyile yayisithi: “Abantwana kufuneka banxibe iimaski ngexesha lesidlo sasemini. Banokuwuthoba ukuze batye okanye basele, baze bawuphakamise ukuze bahlafune, baginye okanye bathethe. ”
Inqununu iqhubekile ichaza nge-imeyile ukuba ngaphandle kwento yokuba le ndawo yokutyela "inenkqubo yokuhamba komoya emnandi" kwaye abafundi bakude ngokwentlalo, "kufuneka siphathe ixesha lesidlo sasemini njengexesha eliyingozi kubo bonke."
Ngokwewebhusayithi yeZikolo zikaRhulumente zeTacoma, i- Covid-19 Umgaqo-nkqubo uthi abafundi, abasebenzi, kunye neendwendwe "kufuneka banxibe iimaski ngaphakathi, ngaphandle kwaxa besitya."
Izikolo zikarhulumente zaseTacoma zikhuphe ingxelo echaza ukuba iNqununu u-O'Brien itolika izikhokelo zayo igqithile kwinjongo. Ingxelo ithi:
Umgangatho obekwe kwaseGiiger wawusekwe ngentembeko njengotoliko lwesebe lezempilo ukuba linxibe iimaski xa 'besitya.' Ukujonga nesebe lezempilo, loo mgangatho ungaphaya kweenjongo zabo. Asiyi kohlwaya nabaphi na abafundi ngokunganxibi iimaski zabo phakathi kokulunywa. ”
Ayiloxesha lokuqala lokufihla okuGqithisileyo
Emuva ngo-Okthobha u-2020, uGavin Newsom, iRhuluneli yaseCalifornia, wayethumele i-tweet malunga nokutya kwiivenkile zokutyela. Uthe: “Uyokutya namalungu osapho lwakho kule mpelaveki? Ungalibali ukugcina imaski yakho phakathi kokulunywa. ”
Uye wongeza nekhathuni ebonisa intombazana encinci enxibe imaski yayo, ukuyisusa ukuyokutya, kwaye ukuyibuyisela kwakhona kulungiso ngalunye. I-tweet Utsalane ngokukhawuleza ngeempendulo ezibiza ingxelo yeRhuluneli sisidenge.
Kwacaciswa ngurhulumente ukuba xa kutyiwa kwiivenkile zokutyela, abantu mabanxibe iimaski zabo kodwa hayi xa besitya kwaye besela-ingcaciso engaphaya: hayi phakathi kokuluma ngakunye.
Kwa-Israyeli, ubuso benziwe buza nolawulo kude. Ivumela izidlo ukuba zitye ngaphandle kokuthatha imaski yazo. Isigqumathelo sinokuvulwa ngesandla esikude ngomatshini okanye imaski iyakusabela ngokuzenzekelayo xa isiva into ekufutshane nokuvulwa kwemaski. Ukubaluleka komama kuyilo.